I-1050-2000mAh yeFektri, abaThengi-China i-1050-2000mAh abaVelisi
I-103450 3.7V 2000mAh ibhetri ye-Li-po egcwalisekayo ye-thermometer
Ibhetri ye-PLM-103450 3.7V 2000mAh ephinda isebenze isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po 652480 3.8V 2000mAh Iseli yebhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, iRobhothi ye-elektroniki, isixhobo sokunyanzeliswa komthetho
Ukutshaja kwakhona i-PLM-652480 3.8V 2000mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
I-Ultrasonic Welding AP50 1200mah 7.4V li-ion ibhetri ngokuthe ngqo yokuzingela unomathotholo i-li li-li ibhetri kwi-handheld walkie talkie
Ifektri ngqo kwiivenkile! Ibhetri etsha ye-PLM-AP50 7.4V 1200mah isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Iinkcukacha zoMveliso: Izicelo: Amathoyizi, izixhobo zasekhaya, ubungakanani bebhetri zabaThengi: 10mm * 34mm * 50mm Igama leBrand: Isiqinisekiso se-PLM: Inombolo yeModeli ye-MSD: Inombolo ye-PLM-103450 Indawo yeMvelaphi: iGuangdong, China Isisindo: 2,5g / PC Uhlobo lwebhetri: Inokuphinda ihlawulwe I-polymer yebhetri Voltage: 3.7V Amandla okusebenza: I-1800mAh Isiqinisekiso: Iinyanga ezili-12 Ukusetyenziswa: isipikha seBluetooth, izinto zokudlala, izixhobo ze-E-mask Cycle life: 500-1000 Times Disparge rate: 1.8A Package: Indibaniselwano ngePakeji yaMntu ngamnye kwiPakeji yoKhuseleko: 1.Dual MOS ukhuselo lwebhodi e-octagonal 2.Short cir ...
Iinkcukacha zeMveliso: Isicelo: Iithoyi, izixhobo zasekhaya, igama leBrand Electronics Brand: Isiqinisekiso se-PLM: Inombolo yeModeli ye-MSDS: PLM-804540 Indawo yokuQala: Guangdong, China Ubunzima: 30g / PC Uhlobo lwebhetri: Ibhetri yePolymer ehlawulekayo kwakhona: 3.7V Amandla: 1100mAh Ubungakanani bebhetri: 8,0 * 45 * 40mm iwaranti yokuSebenzisa: iithoyi, isicoci se-elektroniki, isithethi seBluetooth Ubomi bokujikeleza: 500-1000Times rate Discharge rate: 1.1A Package: Iindidi ezimbini zePokisi yePakeji yoKhuseleko:: 1.Dual MOS octagonal board board 2 .. .